जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश २ को अधिवेशन पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनपश्चात गर्ने गरी स्थगित गरेकाे छ । प्रदेश २ का निर्वाचन संजोजक तथा केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले सोमबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश अधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न भएलगत्तै हुने गरी स्थगित भएकाे जानकारी गराए । सबै जिल्लाबाट अधिवेशन प्रतिनिधीहरूको नामावली प्रदेश निर्वाचन समितिलाई प्राप्त हुन […] The post प्रदेश २ मा कांग्रेस अधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशनपछि appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
प्रदेश २ मा किन भइरहेको छ कांग्रेस अधिवेशन भाँड्ने खेल : दोषी देउवा कि निधि?
वीरगंज : ६ प्रदेशमा कांग्रेस अधिवेशनको सम्पन्न हुन लागेको छ। कतिपयको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। तर प्रदेश २ को कांग्रेस अधिवेशन अझै अन्योलमा छ। कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिको बलियो पकड मानिने प्रदेश २ मा किन अन्योलता कायम रहेको छ? यसबारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि उपसभापति निधिसम्मलाई विभिन्न आरोप लाग्न थालेको…
कांग्रेस अधिवेशन : लुम्बिनी प्रदेशमा भरत साह र अमर पुन भिड्दै
बुटवल । नेपाली कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्वका लागि दुई पक्षबीच चुनावी भिडन्त हुने भएको छ । बिहीबारदेखि सुरू हुने लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनमा सभापतिका लागि संस्थापन र संस्थापनइतर समूहबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला अधिवेशनहरूमा भने पौडेल पक्षले अधिकांश सभापति जितेको छ । नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दाङ, प्यूठान, रोल्पा र […] The post कांग्रेस अधिवेशन : लुम्बिनी प्रदेशमा भरत साह र अमर पुन भिड्दै appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
गुल्मीमा कांग्रेस अधिवेशन स्थगित
गुल्मी– नेपाली कांग्रेस गुल्मीको अधिवेशनमा मुसिकोट नगरपालिका मतदान केन्द्रको मतदान प्रक्रिया रोकिएको छ । मुसिकोट नगरपालिको मतदान केन्द्रमा मतपत्रमा संकेत उल्लेख गरेर मतदान गरिएको भन्दै सभापतिका उमेदवार बेदबहादुर थापा मगरले विरोध जनाएपछि मतदान प्रक्रिया रोकिएको हो । थापा मगरले निर्वाचन अधिकृतलाई मतदान प्रक्रिया स्थगित गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । मुसिकोटबाहेक अरु स्थानीय तहको […]
सर्लाहीमा कांग्रेस अधिवेशन अन्योलमा
काठमाडौं । सर्लाहीमा नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन अन्योलमा परेको छ । अधिवेशन गराउन खटाइएका दोस्रो निर्वाचन अधिकृत दिवाकरराज पाण्डेले पनि राजीनामा दिएपछि अधिवेशन अन्योलमा परेको हो । पहिलो पटक खटाइएको निर्वाचन अधिकृत विनोद कार्कीले दुई पक्षको विवादले अधिवेशन गराउन नसक्ने भन्दै राजीनामा दिनुभएको थियो । दोस्रो पटक खटाइएका निर्वाचन अधिकृत पाण्डेले पनि विवाद मिलाउन खोज्दा आफूमाथि […]
कांग्रेस अधिवेशन : क्षेत्रीय सभापतिका दाबेदारसहित गाउँपालिका उपप्रमुख वडामै पराजित
बझाङमा कांग्रेस अधिवेशन स्थगित
बझाङ – नेपाली कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशन गर्न खटाइएका प्रमुख मतदान अधिकृत गायब भएपछि नेतृत्व चयन स्थगन भएको छ। जिल्ला अधिवेशनका लागि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले खटाएका प्रमुख मतदान अधिकृत चेतराज भट्ट शनिबार रातिदेखि पार्टीको सम्पर्कमा नरहेको नेताले बताएका छन्। जिल्ला अधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वका लागि दुई समूहको प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला नेतृत्व चयन स्थगन भएको हो। पूर्वमन्त्री सुरेश […]
बैतडीका सबै वडाका कांग्रेस अधिवेशन सम्पन्न
बैतडी, भदौ २२ । बैतडीमा रहेका १० स्थानीय तहका सबै वडामा नेपाली कांग्रेसको वडा तहको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । सोमबार र मंगलबार गरेर जिल्लामा सबै ८४ वडामा अधिवेशन सम्पन्न भएको हो । जसमध्ये ७७ वडामा सर्वसम्मत र ७ वडामा निर्वाचनमार्फत वडा कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि छनौट गरिएको हो । निर्वाचन अधिकृत पुष्पराज जोशीका अनुसार […]
संस्थापन इतरका नेताहरूले १४औं महाधिवेशनमा सहमतिमै सभापतिमा एकजनाले मात्रै उम्मेदवारी दिने दाबी गरेका छन् ।...
कांग्रेस अधिवेशन: उम्मेदवारी दर्ताबाटै करोडौं रुपैयाँ
काठमाडौं, भदौ ११। सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनका लागि उम्मेदवारी दर्ताबाटै करोडौं रुपैयाँ संकलन गर्ने भएको छ । भदौ १८ गतेदेखि तल्लो तहको अधिवेशन गरी आगामी मंसिर दोस्रो सातासम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न लागेको कांग्रेसले उम्मेदवारी दर्ताका लागि १ सय देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तोकेको छ । कांग्रेसको निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार सबैभन्दा कम शुल्क वडा कार्यसमिति […]